vivo Y12A | vivo Myanmar
၂.၁။ စွမ်းအားပြည့် 5000 mAh ဘက်ထရီ
၃.၁။ AI Dual Camera
၁.၁။ Halo FullView™ Display
Y12A တွင် ၆.၅၁ လက်မ Halo FullView ™ Display နှင့် HD+ အရည်အသွေးရှိ (1600 × 720) resolution တို့ပါဝင်သည်။ ဗီဒီယိုများနှင့် ဂိမ်းများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မြင်ကွင်းနဲ့ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမျက်နှာပြင်သည် မျက်စိကို အန္တရာယ်ရှိသောအပြာရောင်မီးများကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
၁.၂။ 2.5D ဖိတ်ဖိတ်တောက် အရောင်လေးများ
vivo ၏ Side-Mounted Fingerprint ဒီဇိုင်းသည် ပါဝါအဖွင့်ခလုတ်နှင့် လက်ဗွေစနစ်ကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်ဒီဇိုင်းသည် Y12A ကို ပိုမိုစတိုင်ကျလှပပြီး သပ်ရပ်သားနားစေတဲ့အပြင် ထပ်မံအားစိုက်ထုတ်စရာမလိုအောင် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို ကောင်းမွန်စေသည်။ တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်ကနေ ဖွင့်ဖို့ကြာချိန်က ဝ.၂၆ စက္ကန့်ပဲ ကြာလို့ မြင်လိုက်ရဖို့တောင် အရမ်းမြန်ချက်ပါပဲ။
Y12A တွင် 5000mAh (TYP) ဘက်ထရီပါရှိပြီး AI စွမ်းအင်ချွေတာသောနည်းပညာဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အားအမြဲပြည့်နေစေမှာပါ။ တစ်ကြိမ် အားအပြည့်သွင်းထားပါက ၁၇.၄ နာရီ အွန်လိုင်း HD ရုပ်ရှင်လွှင့်ခြင်း (သို့) ၁၀.၂ နာရီ စွမ်းအင်သုံးများသော ဂိမ်းများကို ကစားနိုင်သည်။ ၎င်းကို 5V / 1A Reverse Charging ဖြင့်လည်းအင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားခြင်းကြောင့် သင်၏ Y12A များကို ပါဝါဘဏ် ကဲ့သို့ အခြားကိရိယာများကို အားသွင်းရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
၃.၂။ Bokeh Camera
2MP Bokeh ကင်မရာသည် တိကျမှန်ကန်သောရလဒ်များကို ရရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော bokeh algorithm ကို ကျေးဇူးတင်ရုံသာ။ အခုတော့ portrait ပုံတွေဟာ ပိုပြီးရှင်သန်နေသလိုပဲ သူတို့တွေဟာ ပိုမိုတိကျနက်နဲလာပါတယ်။
၄.၁။ Face Wake
၄.၂။ Multi-Turbo 3.0
၅။ Funtouch OS 11
၅.၁။ AI Albums
1. ၁။ Screen size မှာ ထောင့်ဖြတ် တိုင်းတာထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ထောင့်မှန်အပြည့်မှာ ၆.၅၁ လက်မဖြစ်ပြီး ထောင့်ချိုးအကွေးများ ထည့်သွင်းတိုင်းတာပါက အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။
2. ၂။ ယခု ပါဝင်သော ပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး display screen ပေါ်တွင် ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံသည် ပုံဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုယ်တိုင် တီထွင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ စံထားရှိထားသည့် ပြင်ပဓာတ်ပုံများကို ရယူနိုင်ပါသည်။
3. ၃။ ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် ဒီဇိုင်းပညာရှင် တိုင်းတာသူများ၊ သုသေသန စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရလဒ်များနှင့် supplier များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်သည် software version၊ specific test environment နှင့် phone model များအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲလွဲသွားနိုင်ပါသည်။
4. ၄။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ အပြောင်းအလဲ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲပြားနိုင်သကဲ့သို့ vivo သည်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာမျက်နှာရှိ ဖော်ပြချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို အသုံးမပြုခင်သေချာဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
5. ၅။ pixel တန်ဖိုးသည် မတူညီသောကင်မရာ အသုံးအနှုန်းများအောက်တွင် ကွဲပြားနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်သည်။
7. ဝ.၂၆ စက္ကန့်သည် ဘေးဘက်လက်ဗွေစနစ်ဖြင့် ဖွင့်ရသည့် ကြာချိန်ဖြစ်ပြီး vivo labs မှ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ဖွင့်ချိန်သည် ဝ.၂၆ စက္ကန့် ဖြစ်ကာ မျက်နှာပြင်ပိတ်ချိန်သည် ဝ.၄၃ စက္ကန့် ကြာမြင့်သည်။ အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမှန်တကယ် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
8. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားချိန် - ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ဖုန်းအားအပြည့်ဖြင့်ဆိုလျှင် 150cd / m² ဖန်သားမျက်နှာပြင် တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိသော Y12A များသည် PUBG ကို ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များဖြင့် ကစားနိုင်ပြီး ၁၀.၂ နာရီအထိ ဆက်တိုက်ကစားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဂိမ်းအချိန်သည် တချို့သော အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
9. အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလွှင့်ချိန် - ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ဖုန်းအားအပြည့်ဖြင့်ဆိုလျှင် 150cd / m² ဖန်သားမျက်နှာပြင် တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိသော Y12A များသည် YouTube ပေါ်တွင် ဗီဒီယိုများကို ၁၇.၄ နာရီအထိ ဆက်တိုက်ဖွင့်ထားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုလွှင့်ပြချိန်သည် တချို့သော အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
10. ပုံမှန်ဘက်ထရီပမာဏသည် 5000 mAh ဖြစ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီပမာဏမှာ 4910 mAh ဖြစ်သည်။
11. Reverse charging စနစ်သည် သီးခြားဝယ်နိုင်သော OTG ကေဘယ်ကြိုး အပ်သည်။
12. ၎င်းကိုအသုံးမပြုမီ ဆက်တင်များတွင် OTG လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာမှုရှိရမည်။
13. စင်တာ Turbo နှင့် AI Turbo တို့ကို မော်ဒယ်အားလုံးတွင် ရရှိနိုင်သည်။